Burcad badeed Soomaali ah oo Xabsi Daa’in lagu xukumay Gudaha Mareykanka – SBC
Burcad badeed Soomaali ah oo Xabsi Daa’in lagu xukumay Gudaha Mareykanka
Maxkamada Qaranka Mareynkanka ee ayaa waxaa Maxkamad lagu soo taagay laba nin oo soomaali ah kuwaasi oo ka mid ahaa koox horey loo xukumay eedeymo la xiriira dilka iyo afduubka dooni Mareykan ay la socdeen kuwaasi oo la dilay guud ahaanba rakaabkii la socday oo ahaa Afar qof oo mareykan ah.
Maxkamada ayaa kuxukuntay Labadan nin inay ku biiraan Koox horey loo hayay oo lagu xukumay Xukun ah Madaxaa ha ku furto ama Xabsi Daa’in.
Ciidamada Mareykanka ee howlgalka ku qaaday Doonida Dalxiis ee Mareykanka lagu dul haystay ayaa waxaa ay ku qabteen in ka badan 15 nin oo soomaali ah kuwaasi oo 11 ka mid ah ay qirteen Danbiga loo haysto.
Maxkmada Gobolka Virginia ee Dalka Mareykanka ayaa horey xukun Dilk ah ugu riday in lagu fuliyo sadex ka mid ah maxaabiista la hayo oo lagu eedeeyay Eedeymo kala duwan oo ay ku jirto inay dilka geysteen.
Dilka kooxdan soomaalida ah loo haysto ayaa waxaa uu yahay kii ugu horeeyay ee Lagu dilo muwaadinin American ah kuwaasi oo dilkooda ay sameyn ku yeesheen Burcad badeeda Soomaalida ee ka qowleysata BAdda Cas iyo Badweynta Hindiya.
Soomaalida afduubtay doonida dalxiis ayaa ku dhawaa 20 qof ayaa waxaa qorshahooda uu ahaa inay madaxfurasho xoog ah ka qaadaan Dalka ay ka soo jeedaan Dadka ay ku qafaasheen Doonida Dalxiis waxaase taas meesha ka saaray ka dib markii Markab Dagaal oo Mareykan ah u dabagal ku smaeeyay Burcad badeeda iyo doonidii qafaasheen.